ခံစားမှု့သံစဉ်: ၂ နှစ်ခရီးစတင်ခြင်း...
Posted by blackroze at Monday, June 04, 2012
ငယ်ကထဲက သူများတွေ သွားတွေညီညီညာညာလေးဆိုရင် အရမ်းသဘောကျတယ်...ကျမသွားတွေက
ထပ်တယ်..မညီဘူး... မညီတော့ ခေါထွက်တဲ့အချောင်းက ခေါတယ်... အထဲဝင်နေတဲ့အချောင်းက ဝင်နေတယ်.... အစွယ်ဖြစ်နေတဲ့အချောင်းက အစွယ် လိုလိုဘာလိုလို နဲ့လေ.....
ကျမသွားတွေကိုပြင်မယ် ပြင်မယ်နဲ့ ပိုက်ဆံနှမြောတာရော... လူလည်းအနာမခံချင်တာရော ..ကြောက်တာရော...အစုံပေါင်းပြီး..ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး...အဲလိုနဲ့ဘဲအချိန်ဆွဲလာတာ
3 ..4 နှစ်ပါဘဲလေ...
အခုတော့ကျမဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ဒီအချိန်မှမပြင်ရင် ကျမအတွက် အချိန်ဆိုတာ နောက်ကျသွားမှာ
အဲတာနဲ့ Taipei တခွင် ဆရာဝန် စုံစမ်းပါတယ်.... ဘယ်ဆရာဝန်က ဘယ်လောက်ယူတာ
ဘယ်လိုအာမခံတာ...ဘယ်လိုကောင်းတယ်.. အင်တာနက်ကနေ ရှာတယ်...
နောက်ဆုံးတော့ ဆရာဝန် တစ်ဦးတွေ့ပါတယ်...ဈေးလည်း ကျမဆစ်သလောက်ရတယ်
သန့်ဆို ဖွင့်တာမှမကြာသေးတာလေ..အသစ်စက်စက်ဆေးခန်း..ဆရာဝန်ကလည်း အမေရိကား
သူကလည်း ဆေးခန်းဖွင့်စ မိတ်ဆွယ်တဲ့အချိန်..ကျမလည်းဈေးဆစ်လို့ရတဲ့ဆေးခန်း
အဲတာနဲ့ သွားပြ လိုက်တယ်..ဆရာဝန်က သွား4ချောင်းနှုတ်ခိုင်းတယ်...
ကျမသွားတွကသိပ်ထပ်နေလို့ပါ .....ကိစ္စမရှိပါဘူး... ပစ်ပစ်ဆိုတဲ့ကျမကလည်း လှချင်တာ
စက်စက်ယို ဆိုတော့ နှုတ်မယ်..ကိစ္စမရှိဘူး...လှဖို့ကအဓိက ဆိုတဲ့ မူ ...လက်ကိုင်ထားလို့
သွားကိုအပေါ်နှစ်ချောင်း အောက် နှစ်ချောင်းကိုနှုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်....
သွားနှုတ်တော့ဆရာဝန်က ဘယ်လောက်သဘောကောင်းလည်းဆိုရင် ကျမအလုပ်နားတဲ့ရက်
ဆန်းဒေးကို ဆေးခန်းကို တကူးတက လာဖွင့်ပြီး... နှုတ်ပေးတာပါ..
( အဲဒီလက ကျမအလုပ်နားရက်က ဆန်းဒေးပါ )
ဆေးခန်းသွားမဲ့ မနက်မှာတော့ ကြောက်တော့ ကြောက်တာပေါ့...ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါဘူး..
လှဖို့အရေး အနာခံရမယ်ဆိုတဲ့မူ ကို ကိုင်ဆွဲလို့ ဆေးခန်းကိုချီတက်သွားပါတယ် ....
ဟိုရောက်တော့ထုံဆေးထိုး ...သွားဆေး.. ပြီးတော့ နှုတ်ပွဲကြီးစတင်ပါလေရော...
ကျမကထုံဆေးထိုးခံထားရတဲ့ သူဆိုတော့ မနာပါဘူး....ထုံဆေးအရှိန်နဲ့လေ...အပြင်က စောင့်နေတဲ့
ကျမညီမ ကတော့ ဂျစ်ဂျစ် ဆိုတဲ့ အသံတွေကြားနေရုံနဲ့တင် ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထနေလေရဲ့....
ကျမအပေါ်သွားက ဆရာဝန်ဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျိုးသွားတယ် ..သွားအစက သွားဖုံးထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်..
အဲတာနဲ့ ဆရာဝန်လည်း ဆွဲထုတ်ပေမဲ့ မထွက်ဘူးထင်ပါတယ်..သွားဖုံးကိုခွဲချလိုက်ပါလေရော...
သွေးတွေထွက်တော့ ပလုပ်ကျင်းခိုင်းတာ ..ကျမ မှန်ကိုတချက်လှမ်းကြည့်တာ...
အပေါ်သွားဖုံးက ဟက်တက်ကြီးကွဲနေတာနော်....ခံနိုင် ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်
ဆိုတာတောင် တော်တော်ကျွတ်ကြဲ သွားတာပါ....မရတော့ဘူးလေ..အဲလိုနှုတ်ပြီးမှတော့
ရှေ့ဆက်ဖို့ဘဲ ရှိတော့တာဘဲ...ဒါနဲ့ကျန်တဲ့ အောက်သွားကိုဆက်နှုတ်တယ်....
ဒါပေမဲ့အ ပေါ်သွားဖုံးကိုတော့ ပြန်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်.... အိမ်ပြန်လာတော့ ထုံဆေးလည်းပျယ်ရော
တပါတ်နီးပါးကိုက်တာ.... အရမ်းနာရင် သောက်ဖို့ ဆိုပြီးဆေးပေးထားတောင် မလောက်ပါဘူး...
ကျမတော်တော် ခံစားလိုက်ရပါတယ် နာကျင်မှု့ကို...ဒါပေမဲ့ကျမနောက်ဆုတ်လို့ မ၇တော့ပါဘူး
နောက်ထပ်သွားနှစ်ချောင်း နှုတ်တာကတော့ လွယ်ပါတယ်..ခွဲရတာ ချုပ်ရတာမရှိပါဘူး...
ဒါပေမဲ့ နှုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့ သွေးမတိတ်ပါဘူး..သွေးတွေက ပါးစပ်ထဲပြည့်လာလိုက်.
.ထွေးထုတ်လိုက်နဲ့...... .ရေခဲအိတ်ကို ပါးတခြမ်းထုံနေအောင် ကပ်ထားရပါတယ် ...သွားအကောင်းတွေကို နှုတ်ပြစ်ရတာ တော်တော် ခံစားရဆိုးတာဘဲ...
နောက်တော့ ကျမရဲ့ သွားနှုတ်ခြင်း ကိစ္စပြီးဆုံးသွားပါတယ်..လူလည်းမစားနိုင် မသောက်နိုင်နဲ့
အိမ်ကညီမကတောင် နင့်ကို pigpig ကနေ မျောက်မျောက် လို့ပြောင်းခေါ်ရတော့မယ်လို့
3.6.2012 ဒီနေ့ သွားတွေကိုစတီးစဆွဲပါတယ်.....အရမ်းနာမှာစိုးလို့ ဆရာဝန်က အပေါ်သွား
ကျမမှန်ကြည့်တော့ အင်မတန်မှကိုရုပ်ဆိုးသွားပါတယ်... နဂိုကမှ ကြည့်လို့အဆင်ပြေသေးတယ်..။။
ဆရာရယ်..ပြီးရင် လှမလှတော့မသိဘူး အခုတော့ အရမ်းရုပ်ဆိုးတာဘဲဆိုတော့ ....
အခုတော့ ကျမအိမ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေရသလိုပါဘဲ...ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်သလိုလို
ဘာလိုလို နဲ့လေ....၂ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလကို ကျမစိတ်ရှည်ခြင်း သည်းခံခြင်းတွေကို လက်ကိုင်
ထားပြီးကျော်ဖြတ်ရမှာပါ...ကျမရဲ့ခံနိုင်ရည်တခုကို စမ်းသမ်မဲ့ ၂ နှစ်လို့ဘဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်..
ဘာဘဲပြောပြောပါ...3.6.2012 ကနေ စရေတွက်ရင် 3.6.2014 ဒီ ၂နှစ်တာကာလကို
လောလောဆယ်တော့ နာကျင်ခြင်းဆိုတာကိုဘဲ တသီးတသန့် ခံစားနေတယ်....
( ကျမအမှတ်တရဖြစ်အောင် ပုံရိုက်ပြီး Facebook မှာတင်ထားတယ်...)
4.6.2012 AM 1:59
အဖိုးကြီး ဒီနေ့ ချစ်ရဲ့လား ဖြစ်နေဦးမယ်။း)
ရှစ်ရက်လားကို ဆိုလိုသည်။ ဥပုသ်ယူဖို့ ဖြစ်သည်။
san htun on4June 2012 at 03:08 said...
၂ နှစ်ပြည့်ရင် Before & After ဓာတ်ပုံလေး ပြပါနော်..ဇွဲကြီးတယ့် ပစ်ပစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်..ခုနေ နာပေမယ် နောင်ကျရင် လှမှာလို့တွေးလိုက်ပါနော်..
ချစ်စံအိမ် on4June 2012 at 03:17 said...
Nyi Linn Thit on4June 2012 at 07:12 said...
ကျနော့်ရဲ့ ညီမတစ်ယောက်လည်း အဲဒီလို စတီးလ်ဆွဲဖူးတယ်၊ အစပိုင်းမှာ ကျင့်သား မရသေးလို့ ခံရခက်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ ပုံမှန် ဖြစ်သွားတယ်၊ အခု ကြိုးတွေဖြုတ်လိုက်တော့ သူ့သွားတွေ တော်တော်လှသွားတယ်၊ ညီမ blackroze လည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မှာ သေချာပါတယ်၊ Keep the faith... ဟုတ်ပြီလား! :)
စံပယ်ချို on4June 2012 at 14:05 said...
ပြေတယ် အရမ်းမာတာတွေသာစားမရတာပါ အမြဲကြည့်နေရတော့လဲ
စိတ်မပူပါနဲ့ လုပ်ပြီးသားလူတွေကိုတွေ့ဖူးမြင်ဖူးပါတယ် အားလုံးလှကြတယ်
AH on4June 2012 at 19:28 said...
2 နှစ်ဆိုတာ ခဏလေးလိုပဲ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ ရောက်သွားမှာ။ အဲ့... အခုတလော သွားစတီးကြိုး ဖန်စီလေးတွေ ခေတ်စားနေသဗျ။ မက်တဲလ်လစ် အနီ၊ အစိမ်း၊ ခရမ်း စုံနေတာပဲ။ မဆိုးဘူး CIA agent ကြီး စမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ အသစ်အဆန်းဖြစ်သွားတာပေါ့...
ညိမ်းနိုင် on4June 2012 at 20:08 said...
အော်......တချို့ လူငယ်တွေသွားမှာစတီးကြိုးတွေတပ်ထားတာ ဒါ့ကြောင့်
ဒွတ်ခခံရမှာပေါ့နော့.....၊နှစ် နှစ်ဆိုတာဖင်လှည့်ခေါင်းလှည့်နဲ့ ကုန်သွားမှာ
ပါဟာ.....၊ဟော...နှစ်နှစ်လည်းပြေ့ရော လူလည်း ပိုလှသွားရော....။
မိုးငွေ့........ on4June 2012 at 22:58 said...
ဘာမှမပူနဲ့ ပစ်ပစ်နောက်နှစ်နှစ်ဆို သိပ်ကိုလှသွားမှာ သွားလေးတွေက..။ အမညီမ၀မ်းကွဲတွေဆိုနှစ်ယောက်လောက်အဲလိုလုပ်ကြတယ်...ရုပ်တောင်ပြောင်းသွားတာ...။ အိမ်နီးရင် ဆန်ပြုတ်ချက်ပေးပါတယ်...။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on5June 2012 at 13:17 said...
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) on 8 June 2012 at 17:33 said...
ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်မိတယ်။ Beauty is painful ဆိုတဲ့ စကားက တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ( မြတ်ကြုံတွေ့ခံစားရသလောက်တော့ အမြဲတမ်းလိုလို) မှန်လွန်းတယ်။
နွေတေးရှင်(မင်းဧရာ) on 8 June 2012 at 22:34 said...
ဘယ့်ဂလိုကြောင့် ကောင်းနေတဲ့သွားတွေကို နှုတ်ပစ်ရတာလဲဗျ။
မကျဉ်းစေ့ လှော်တွေရမယ် ပဲကြီးလှော်တွေရမယ် ပိုက်ဆံမရှိရင် အလကားပေးမယ်))))၀။
phung bella on 26 June 2012 at 14:30 said...
Mary Grace on 28 June 2012 at 22:22 said...
ချစ်သူမောင် on9July 2012 at 01:18 said...
Mary Grace on 12 July 2012 at 04:36 said...